लिंग उत्तेजित हुँदैन ? माकुराको विषले औषधिको काम गर्छ « हाम्रो ईकोनोमी
लिंग उत्तेजित हुँदैन ? माकुराको विषले औषधिको काम गर्छ
किन बढ्दैछ सम्बन्धविच्छेदको घटना, हरेक एक सेकेन्डमा एउटा सम्बन्धविच्छेद
हुनत यो उमेर यसरी छटपटाउने खालको पनि हो । तुरुन्तै शारीरिक सम्पर्क भैहालेकोले पनि छटपटाहट बढेको हुनसक्छ । युवतीलाई आफूले बचाएर राखेको भर्जिननेस तोडिएकोमा केही पश्चाताप पनि हुनसक्छ । तपाईहरुको छटपटाहटमा यस्ता थुप्रै पक्षहरुको भूमिका रहेको छ । पहिलाका अध्ययनहरुले देखाए अनुसार पहिलो डेटिङ्गमै पनि शारीरिक सम्पर्क भैहालेमा यसले जोडीको दीर्घकालिन सम्वन्धमा खासै असर पर्दैन ।